Ugwu mgbawa Etna: njirimara, geology, mgbawa na ịmata ihe | Meteorology netwọkụ
Portillo nke German | 26/08/2021 10:35 | Geology
Otu n'ime ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ na Europe niile bụ Ugwu Etna. A makwaara ya dị ka Ugwu Etna na ọ bụ ugwu mgbawa nke dị n'ụsọ oké osimiri ọwụwa anyanwụ nke Sicily na mpaghara ndịda Italy. A na -ahụta ya dị ka ugwu mgbawa kacha arụ ọrụ na Europe niile ebe ọ na -agbawa n'ime afọ ole na ole. Ọ bụ ugwu mgbawa nke na -adọta ọtụtụ njem nlegharị anya na ọ bụ isi ego na -enweta agwaetiti ahụ.
N'isiokwu a, anyị ga -agwa gị maka njirimara, mgbawa na ịmata ihe gbasara ugwu mgbawa Etna.
2 Geology nke ugwu mgbawa
3 Mgbawa na efere tectonic nke ugwu mgbawa Etna
Ugwu a na -agbọpụta ọkụ na -ebuli obodo Catania n'àgwàetiti Sicily. Ọ nọ na -eto ruo ihe dị ka afọ 500.000 ma nwee ọtụtụ mgbawa malitere na 2001. Ọ nwetela ọtụtụ mgbawa, gụnyere mgbawa ime ihe ike na oke mmiri na -asọ. Ihe karịrị 25% nke ndị Sicily bi na mkpọda Ugwu Etna, nke bụ isi ego n'agwaetiti ahụ, gụnyere ọrụ ugbo (n'ihi ala nwere ugwu mgbawa) na njem nlegharị anya.
N'ebe ịdị elu ya karịrị mita 3.300, ọ bụ ugwu mgbawa kachasị elu na nke sara mbara na kọntinent Europe, ugwu kachasị elu na efere Mediterenian na ugwu kachasị elu na Italy na ndịda Alps. Ọ na -eleghara Oké Osimiri Ionian n'akụkụ ọwụwa anyanwụ, Osimiri Simito n'akụkụ ọdịda anyanwụ na ndịda, yana Osimiri Alcantara nke dị n'ebe ugwu.
Mgbawa ugwu na -ekpuchi mpaghara ihe dị ka square kilomita 1.600, nwere dayameta nke ihe dị ka kilomita 35 site n'ebe ugwu ruo ndịda, gburugburu ihe dị ka kilomita 200 na olu ya dị ihe dị ka square kilomita 500.
Site na oke osimiri ruo na elu ugwu ahụ, ihe ndị mara mma na mgbanwe ebe obibi na -eju anya, ya na ihe ndị dị ebube sitere n'okike. Ihe a niile na -eme ka ebe a pụọ ​​iche maka ndị njem, ndị na -ese foto, ndị na -ahụ maka okike, ndị na -ahụ maka mgbawa ugwu, nnwere onwe ime mmụọ na ndị hụrụ ụwa na paradaịs n'anya. Eastern Sicily na -egosi ụdị ala dị iche icheMana site na echiche ala, ọ na -enyekwa ihe dị iche iche dị ịtụnanya.
Geology nke ugwu mgbawa
Njirimara ala ya na -egosi na ugwu mgbawa Etna na -arụ ọrụ kemgbe njedebe nke Neogene (ya bụ, nde afọ 2,6 gara aga). Ugwu mgbawa a nwere ebe ọrụ karịrị otu. A na -akpụ ọtụtụ cones nke abụọ na mgbape transverse nke na -esi n'etiti etiti ruo n'akụkụ. Ọdịdị ugwu a dị ugbu a bụ nsonaazụ nke opekata mpe ebe mgbawa abụọ.
N'ebe dị anya naanị ihe dị ka kilomita 200. na -agafe ógbè Messina, Catania na Syracuse, enwere efere tectonic abụọ dị iche iche nwere ụdị okwute dị iche iche, site na nkume metamorphic ruo oke okwute na sedimenti, mpaghara mbibi, ọtụtụ mmejọ mpaghara. Ugwu Etna, ugwu mgbawa na -arụ ọrụ na agwaetiti Aeolian na mpụta nke ihe mgbawa ugwu oge ochie na mbara ala Ugwu Ibleos.
Enwere okpuru ala siri ike n'okpuru Ugwu Etna, nke nwere ike iru ịdị elu nke 1.000 mita, na -eme oke nke oke ugwu mgbawa. akwakọba n'ime afọ 500.000 bụ ihe dịka mita 2.000.
Akụkụ ugwu na ọdịda anyanwụ nke okwute sedimentary dị na ala nke ugwu mgbawa ahụ bụ usoro Miocene clay-turbidite (nke e mere site na ebili mmiri nke ebili mmiri na-ebugharị), ebe akụkụ ndịda na ọwụwa anyanwụ bụ nsị mmiri bara ụba sitere na Pleistocene.
N'ụzọ dị iche, n'ihi hydrogeology nke ugwu mgbawa a, mpaghara ahụ bara ọgaranya na mmiri karịa Sicily ndị ọzọ. N'eziokwu, lava na-adị oke mma, na-eme ihe dị ka aquifer, ma na-anọdụ ala na-enweghị ntụpọ, nke na-adịghị emebi emebi. Anyị nwere ike were ugwu Etna dịka nnukwu ogbo nke nwere ike ịmịkọrọ mmiri ozuzo oyi na snow mmiri. Mmiri a niile na -agabiga ahụ nke ugwu mgbawa wee mesịa pụta na isi iyi, ọkachasị na nso njikọ dị n'etiti oke nkume na -anaghị emebi emebi na nke nwere ike ime.
Mgbawa na efere tectonic nke ugwu mgbawa Etna
N'agbata afọ 2002 na 2003, nnukwu mgbawa ugwu kacha agbawa n'ime ọtụtụ afọ wepụtara nnukwu ntụ, enwere ike ịhụ ya ngwa ngwa site na mbara igwe, ruo Libya, n'akụkụ nke ọzọ nke Oké Osimiri Mediterenian.
Ọrụ seismic n'oge mgbawa ahụ mere ka akụkụ ugwu ọwụwa anyanwụ nke ugwu mgbawa ahụ daa na mita abụọ, na ọtụtụ ụlọ n'akụkụ akụkụ ugwu mgbawa ahụ mebiri mbibi. Mgbawa ahụ bibiri Rifugio Sapienza kpamkpam n'akụkụ ndịda nke ugwu mgbawa.
Enwere ọtụtụ echiche maka ihe mere ọkụ ọkụ Etna ji arụ ọrụ nke ukwuu. Dị ka ugwu mgbawa ugwu Mediterenian ndị ọzọ dịka Stromboli na Vesuvius, dị na njedebe mmeri, yana efere tectonic Africa a na -akwanye ya n'okpuru efere Eurasia. Agbanyeghị na ha dị nso na mpaghara ala, ugwu mgbawa Etna dị nnọọ iche na ugwu mgbawa ndị ọzọ. Ọ bụ akụkụ nke arc mgbawa dị iche. Etna, kama ịnọdụ ala na mpaghara mbata, na -anọdụ ala n'ihu ya.
Dabere na mmejọ na -arụ ọrụ n'etiti efere Afrịka na microplate Ionian, ha na -amịkọrọ n'okpuru efere Eurasia. Ihe akaebe dị ugbu a na -egosi na ọ nwere ike bụrụ na efere ionic dị nfe dị mfe, nke ụfọdụ efere Africa dị arọ butere ụfọdụ. Oghere nke efere ionic nwere mmasị na -amịkọrọ na magma ahụ si n'uwe elu ụwa.
Ihe atụ a nwere ike ịkọwa ụdị lava sitere na mgbawa ugwu Ugwu Etna, yiri ụdị ọkụ na -emepụta n'akụkụ oke osimiri, ebe a na -amanye magma nke akwa ahụ ka ọ gafee n'ime eriri. Lava sitere na ugwu mgbawa ndị ọzọ bụ ụdị nke agbazere agba dị ugbu a kama mgbawa nke akwa mwụda ahụ.
Ụfọdụ n'ime ihe ndị na -achọkarị ịma na ugwu mgbawa a bụ ndị a:
Ọ pụtara na ihe nkiri Star Wars
Enwere ọtụtụ mbọ iji gbochie mmiri na -asọba nke na -eyi egwu ibibi obodo Catania.
Ọ bụ stratovolcano. A na -ele ụdị ugwu mgbawa a anya dị ka nke kacha dị ize ndụ n'ihi mgbawa ya nke na -agbawa agbawa.
Aha Etna pụtara "A na m agba ọkụ."
Ụfọdụ n'ime lava sitere n'ugwu mgbawa dị afọ 300.000.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara ugwu mgbawa Etna na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Geology » Ugwu Etna